BLAKE LIVELY KURYAN REYNOLDS: NGUMHLOBO WAM OSENYONGWENI - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Blake Lively kuRyan Reynolds: NguMhlobo wam osenyongweni
Esi sibini siphantse sibe yiminyaka emihlanu siphinde sibonise ukuba kutheni sesinye sezibini ozithandayo zaseHollywood. (Shutterstock.com)
Ngu: Joyce Chen 08/30/2018 ngo-5: 02 PM
Blake Ebukhoma kwaye URyan Reynolds unayo yonke into: ukubukeka, udumo, imali, kodwa mhlawumbi okona kubaluleke kakhulu, uthando-kwinto abayenzayo nakwabanye.
ishawa yomtshato siyabulela ngamagama
Esi sibini, esitshatileyo sabuya ngo-2012 kwaye sabelana ngeentombi ezimbini kunye, uJames, 3, no-Inez, iinyanga ezingama-23, zizinzile kwaye ziyathandana ukusukela oko baqala ukuthandana ngasekupheleni kuka-2011 emva kokudibana Isibane esiluhlaza kunyaka ophelileyo.
Elona candelo likhulu lomntu wabo woluntu, nangona kunjalo, bahlala kwi-Intanethi, isibini sihlala siqhuzazana kwimidiya yoluntu. Kodwa uLife, 31, utyhile ngexesha losuku lokushicilela Uhlobo olulula ukuba ii-back-and-outs ezimnandi zesibini kumajelo asekuhlaleni ayisiyomboniso nje; yena noReynolds, 41, bayathanda ukuqhuzulana ebomini bokwenyani ngokunjalo.
Sihlekisana, utshilo u-Lively. Imini yonke siqhula sijikeleza ngenxa yokuba ngumhlobo wam osenyongweni.
Ewe kunjalo, Mvanje mvanje uthumele ifoto kunye nomyeni wakhe kumsitho wokuphehlelelwa kwe-Aviation Gin. Umngani ogqibelele. Umnini we @aviationgin. Imfesane AF. Nanku ukujonga kuwe, mntwana, wachaza umboniso wesilayidi.
Umngani ogqibelele. Umnini we @aviationgin. Imfesane AF. Nanku ukujonga 'kuwe, mntwana. ♥ ️ @nqabamatshazi
Iposi ekwabelwana ngalo ngu Blake Ebukhoma (@blakelively) nge-Aug 14, 2018 kwi-3: 57 pm PDT
Banobuhlobo obuqinileyo, umthombo kutshanje uxelelwe Ngeveki esi sibini. Ngokwenene bebengenako ukonwaba ngakumbi nangakumbi eluthandweni.
Kuphononongo luka-2015 olwenziwe yi-National Bureau yoPhando lwezoQoqo eCanada, abaphandi bafumanise ukuba kuyacetyiswa ukuba utshate umhlobo wakho osenyongweni, kuba yinkalo yobambiswano kubudlelwane obanceda imitshato ihlale ixesha elide, xa kuthelekiswa necala lezothando.
Sicinga ukuba ininzi malunga nolwalamano lwentlalo kunesimo esisemthethweni, umphandi uShawn Grover uxelele iHuffington Post . Umtshato, ngandlel 'ithile, ubuhlobo obuphezulu.
Nangona esi sibini sikhupha inkwenkwezi eninzi, bobabini bakhetha ukuhlala ngaphandle xa bengasebenzi okanye, bathi, Uhlobo olulula , uphume ngoSeptemba 14. Oko kuya kuthetha ukuba bagcina ubomi babo babucala babucala, kwaye ngakumbi ngenxa yeentombi zabo ezimbini ezincinci.
Ndiyabathanda abantu abafumanisa ukuba okubazalisekisayo bubugcisa babo okanye ngumsebenzi wabo, kodwa into egcwalisa mna nomyeni wam lusapho lwethu. Ukwazi loo nto, yonke enye into iza okwesibini, Ukuxelwa kwangaphambili bekuxelwe Ubuhle . Sincame into nganye esiyithandayo ukuze singasebenzi ngexesha elinye. Ndinethamsanqa lokuba ndikwindawo ngoku apho ndifumana khona izinto-incwadi okanye iskripthi-kwangoko kwaye ndiyiphuhlise. Ndiyazi ngaphambi kwexesha ukuba ndiza kusebenza kulo msebenzi ngeli xesha. Kwaye sinokucwangcisa ngeenxa zonke.
indlela yokukhetha indawo yomtshato
izipho zokumkhumbula ezipholile
i-decks enomthunzi we-pergolas
Intombazana ehloniphekileyo kufuneka ibe nini
indlela yokwenza ibhanti ephezulu
Iinwele zamantombazana ze-lil zomtshato